राष्ट्रिय गौरवको आयोजना: बुढीगण्डकी प्रभावितको मन्त्रीलाई प्रश्न - कहिले अघि बढ्छ आयोजना ? - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना: बुढीगण्डकी प्रभावितको मन्त्रीलाई प्रश्न - कहिले अघि बढ्छ आयोजना ?
काठमाडौँ / फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको पनि सात वर्ष भयो ।
सोही समस्याको समाधान गर्ने ध्येयका साथ आयोजना प्रभावितले सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीसँग भेटवार्ता गरी समस्या समाधान गरिदिन र शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रसंग हो, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अघिल्ला वर्षहरु जस्तै यस वर्ष पनि कुनै परिवर्तन भएको छैन । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजना प्रभावितले पटक पटक समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरेपनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
आइतबार उनीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरी तत्काल आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
सोही क्रममा आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री फम्फा भुसालसँग भेट गरी स्थानीयवासीको समस्या समाधान गरी निर्माणको काम शुरु गर्न अनुरोध गरे ।
उनीहरुको स्पष्ट भनाइ थियो, “आयोजना कहिले बन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्नुपर्यो र स्थानीयवासीको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्यो ।” बुढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक जगन्नाथ खनाल लामो समय बित्दा आयोजनाले गति लिन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दछन् ।
“हामीले सधैँ आयोजनाको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्यौँ, तर काम हुन सकेको छैन । स्थानीयले घरगोठको मुआब्जा निर्धारण, पुनर्वासलगायत विषयमा चाडो सल्टाउन आग्रह गरेका छौँ ।” नयाँ सरकारले स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर तत्काल आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको खनालको भनाइ छ ।
जवाफमा मन्त्री भुसालले जग्गाको समस्या जटिल बन्दै गएको र त्यसलाई सुल्झाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने बताए । उनले घरबासको हक संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको स्पष्ट गर्दै त्यसका लागि आफूले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर सल्टाउन पहल गर्ने विश्वास दिलाए ।
अर्थमन्त्री शर्माले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको भन्दै यो विषयमा बुझेर उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यसँग मन्त्री शर्माले भनेका थिए, “मलाई १५ दिनको समय दिनुस् सबै बुझेर तपाईँहरूलाई सकारात्मक निर्णय दिनेछु ।”
प्रदेशसभा सदस्य जगत सिंखडा स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा स्वदेशी लगानीमा आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजक रहनु भएको कार्यदलले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने आधारसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
स्थानीयवासीले ऊर्जा मन्त्री भइसकेका अर्थमन्त्री शर्मा र ऊर्जा मन्त्री भुसालले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको खण्डमा आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आयोजना प्रभावितका लागि हालसम्म झण्डै रु ३७ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मुआब्जा निर्धारण भएपनि विवादका कारण वितरण हुन सकेको छैन ।
नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार शुल्कमार्फत भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाएको छ । त्यसवापत हालसम्म झण्डै रु ४५ अर्ब जम्मा भइसकेको छ । आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब ९० अर्ब बराबर हुने अनुमान छ । राससबाट रमेश लम्सालको रापोर्ट